Umzi-mveliso wokupholisa we-Chocolate, uMboneleli wokuPholisa weTkokolethi-umatshini we-LST
Ukupholisa itshokholethi yeyona nxalenye iphambili kuyo yonke inkqubo yemveliso, inceda imveliso yetshokholethi ukuba iphole kwaye imiswe ngokukhawuleza, inokwenziwa ngokwezifiso kumthengi, njengomthamo wokukhupha umahluko.
Yintoni iSipholisi sohlobo oluthe nkqo lweChaine?
Iitonela zokupholisa ezithe nkqo zisetyenziselwa ukupholisa imveliso emva kokubunjwa. Njengelekese egcweleyo, iilekese ezinzima, iilekese zetaffy, zonke iintlobo zetshokolethi kunye nezinye iimveliso zeconfectionery. igcwele ngokuzenzekelayo kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye uluhlu lohlengahlengiso lobushushu luhlala luyi-0 ~ 10 ℃.
Yintoni eyona NONE
I-1.I-tunnel yokupholisa ixhotywe ngeeseti ze-2 ze-15P iinkqubo zefriji.Ukupholisa ngokuthe ngqo kwicala elingezantsi kunye noyilo olungathanga ngqo oluphezulu lokupholisa.
2.Yonke insimbi engenasici kwaye leyo ngokuthobela ucoceko lokutya kunye nomgangatho wokhuseleko.
3.Amanqanaba amabini okanye amanqanaba angaphezulu okupholisa.Uyilo lokupholisa olunamanqanaba amaninzi luyenza igcine amandla, ipholise ngokukhawuleza, isebenze lula, njalo njalo.
I-4.Isigqubuthelo setonela samkela ingcamango yoyilo yamva nje, igqunywe ngokupheleleyo kwaye uyilo olutywiniweyo luphepha kakhulu ukulahleka kwamandla.
5.Eyona nto icacileyo kunye neyona inzuzo ibalulekileyo kwitonela yokupholisa ngokuthe nkqo kukugcina indawo.
Usebenza njani iSipholisi soHlobo oluthe nkqo?
Emva kokuhanjiswa kwitonela yokupholisa, iimveliso ziya kupholiswa ngumoya opholileyo okhethekileyo. Umphumo wokupholisa uzinzile kwaye yonke inkqubo icocekile, kwaye ipholile luhlobo oluthe nkqo, ngoko iya kuba nesithuba esaneleyo sokuba imveliso ihlale kwindawo epholileyo, iya kuqinisekisa. ukuba imveliso inokupholiswa ngokukhawuleza kwaye imile ngexesha elifutshane.Ngenisa i-compressor evela e-USA kunye ne-converter frequency iphucula kakhulu ukuzinza kunye nokuqina kwesi sixhobo.
Jonga ividiyo yethu kwinkqubo yokusebenza kwebhola.
Zithini iinkcukacha ze-PLC?